Windows PCတွေပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး ဓါတ်ပုံတွေပြင်နိုင်မယ့် editing ဆော့ဝဲလ်များ – eazycorner
ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း၊ ဖိုင်များ ပြင်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လူသုံး‌များနေတဲ့ edit ဆော့ဝဲလ်ကောင်းများစွာထဲကမှ ပြုပြင်ရလွယ်ကူပြီး သာမာန်ဓါတ်ပုံကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံကောင်း ဖြစ်အောင်ထိ တည်းဖြတ်လို့ရ‌စေတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးတွေအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
‌တော်တော်များများသိနေသုံးနေကြပြီဖြစ်တဲ့ adobe ဟာ ဓါတ်ပုံတပုံကို tools ပေါင်းများစွာနဲ့ ပြုပြင်ဖန်တီးလို့ရပြီး ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူ၊ ဂရပ်ဖစ် ဖန်တီးသူနှင့် ဓါတ်ပုံဆရာများ အသုံးများသော ဆော့ဝဲလ်တခု ဖြစ်သည်။ motion blur, spin blurစတဲ့ function ကောင်းများစွာ ပါ၀င်ပါတယ်။
Canva ဟာ Social Media အတွက် Image အမိုက်စားတွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Facebook, Google Account တွေနဲ့ Sign In ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Canva မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ Image Design အများအပြားရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေလည်းဆိုရင် Presentation, Poster, Facebook Cover, Instagram Post, Twitter Post အစရှိတဲ့ Social Media Network တွေမှာအသုံးဝင်တဲ့ Image Design တွေကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Resource လေးဖြစ်ပါတယ်။
‌3. ACDSee Ultimate
ပုံများစွာတို့ကို formatများစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက်ပြင်ပေးသော function တွေ များစွာပါရှိပါတယ်။ HEIF High Efficiency Image file အစရှိသော ဖိုင်အမျိူးအစားများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးထားပါသေးတယ်။
4. Topaz Studio
AI clear motion ပါရှိပြီး ဓါတ်ပုံများအား ပိုမိုကြည်လင်စေခြင်း၊ camera ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော JPEG နှင့် Raw File တို့ကို ကောင်းမွန်စွာဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးနိုင် တာကြောင့်လည်း ရွေးချယ် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
adobe Lightroom လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေပြင်ရာမှာ လူသိများ ထင်ရှားတဲ့ ဆော့ဝဲလ် ကောင်းတခု ဖြစ်တာကို ပြောပြစရာမလိုပါဘူး။ lightroom အသုံးပြုသူတိုင်း မိမိပုံတပုံချင်းစီကို အခြားသူများနှင့် ဝေမျှနိုင်ခြင်း လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်းနဲ့ စိစစ်နိုင်ခြင်းတို့ကို adobe Lightroom ထဲမှာပဲ စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ။
Luminar ဆော့ဝဲလ်သည် ဓါတ်ပုံ ပြုပြင်ခြင်းတွင် smart contrast ပါရှိခြင်း၊ mouse တခုတည်း အသုံးပြုလျှင်တောင် မလိုအပ်သော အရာများအား ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် portrait mode ဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ပုံများအား သဘာ၀ အလင်းအမှောင် ဖန်တီးမှုများစွာ လုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်း တခုဖြစ်ပါတယ်။
Jpeg, png format ဖိုင်များနှင့် ရိုက်ကူးထားသော ပုံများပြုပြင်ခြင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး တည်းဖြတ်ထားသော ပုံများအား twitter, facebook ကဲ့သို့သော လူမှုမီဒီယာ စာမျက်နှာများဆီသို့ အလွယ်တကူဝေမျှနိုင်ခြင်း၊ မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းများအား လှပစွာပြုပြင် နိုင်ခြင်းနှင့် စတစ်ကာ ကောင်းများစွာတို့ ဖန်တီးထည့်သွင်းနိုင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။
8. Fotophire Exiting Toolkit
Fotophire ဟာ special effects များစွာပါရှိခြင်း၊ အခက်အခဲမရှိ အလွယ်တကူ မလိုအပ်သည်များကို ဖယ်ရှားနိုင်စေရန် ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးမှာ click တချက်တည်းနှင့် background ဖျက်ထုတ်ခြင်း၊ မလိုအပ်တာများ ဖယ်ရှားခြင်း၊ အသုံးပြုသူနဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကြား user – friendly interface ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည့် software ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Colours, Effects, Exposure, Filter အစရှိတဲ့ ချိန်ညှိခြင်းတွေကို DxO Photolab ထဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဓါတ်ပုံတွေကို brush tools လုပ်ခြင်း၊ retouch လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်ရ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမှာပါ။
ဒီဆော့ဝဲလ်ရဲ့ အားသာချက်တွေက template ကောင်းများစွာပါရှိခြင်း၊ ပုံများအား arrange‌ လုပ်နိုင်ခြင်း၊ grid style, freestyle collages လုပ်နိုင်ခြင်း၊ pc version သာမက ဖုန်း version များမှာပါ အောင်မြင်မှုရနေတဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကောင်း တခုပါ။
ဒါလေးကတော့ ဓါတ်ပုံတွေကို တည်းဖြတ်ရာတွင် ဓါတ်ပုံတွေရဲ့ မူလ quality အရည်အသွေး မကျစေပဲ နဲ့ convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တခြား အသုံးပြုစရာ Tools တွေစုံလင်စွာပါပြီး Files Format တွေကိုလည်း လိုသလို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ အများအပြားကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း optimize လုပ်နိုင်ပြီး Red eye , removal tool များလည်း ပါရှိပါသေးတယ်။ တည်းဖြတ် ရာတွင် Automatic backup ပါရှိတာကြောင့် မိမိရဲ့ မူလပုံတွေကို ပျက်စီးခြင်း မှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် watermark တွေကိုလည်း လိုသလို ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး Picasa View ကဲ့သို့ ဓါတ်ပုံတွေကိုလည်း လိုသလိုကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
‌ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးအတွက် စံသတ်မှတ်ထားသော demosaic algorithm အသစ် RGB အရောင်ချိန်ခြင်း၊ ဆင်ဆာပြုလုပ်ရန်အတွက် ရုပ်ပုံ၏ အစိတ်အပိုင်းများကိုလွယ်ကူစွာ pixelation / blurring ပြုလုပ်ရန်အတွက် censorship module ပါရှိခြင်း၊ အသေးစိတ် သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ opacity mask တစ်ခုကို ဖန်တီး၍ ပြသခြင်း အစရှိ သည့် function များနှင့် ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
‌13. Capture One Pro
မိမိဓါတ်ပုံများရဲ့ colour ပိုင်း၊ အလင်းအမှာင် ချိန်ညှိမှုများ၊ layerပေါင်းများစွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ရာတွင် live preview ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊ အဖြူ အမဲဓါတ်ပုံများကို ကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်တာကို ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
photoshop သို့မဟုတ် layer များအတွက် အထောက်အပံ့နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ပုံရိပ်ကိုင်တွယ်မှု စွမ်းရည်များပါသော Pixlr နှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပုံလှည့်ခြင်းစသည့် အခြေခံတည်းဖြတ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဓာတ်ပုံများမှ collage ဖန်တီးရန် လုပ်ဆောင်ချက်များလည်းရှိသည်။
JPG, PNG, RAW, DCR format ပုံများကို filter လုပ်ပေးခြင်း၊ curves, resize, exposure, colour correction အစရှိတဲ့ function ကောင်းများစွာပါရှိခြင်း၊ HDR (high dynamic range) ကဲ့သို့ အဆင့်မြင့် တင်နိုင်ခြင်းများ၊ အသုံးပြုများလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Photoshop ဆော့ဝဲလ်ကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
# source : guru
translate by Thet Hein
One thought on “Windows PCတွေပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး ဓါတ်ပုံတွေပြင်နိုင်မယ့် editing ဆော့ဝဲလ်များ”